Wastaadyo Cement Oo xidigaha la taaban karo Job Description / Doorarka Oo Template Duty – JobDescriptionSample
Home / Wastaadyo Cement Oo xidigaha la taaban karo Job Description / Doorarka Oo Template Duty
qalabka sac oo qurxoonayd oo dhameysatay oo shamiito ah oo la isku qasan, tusaale ahaan Gogosha lugeeyo, Waddooyinkiisa, ama kaabad isku shaqaalaysiiyo oo xul ah ee gacmaha iyo alaabtii awood. Diyaarso kala duwan oo ku saabsan lugeeyo ama dararkii; hulalka balastar; iyo shaqaaleeyaan miinshaaro si cad ama kala goysyada ballaarinta.
Imtixaan cayn ah in taageero la taaban karo si aad u aragto in ay si sax ah u sameeyey.
Go'an foomamka in lagu qaado cement dhinaca tuurid ka doonayo iyo heerka, Oo kuwanuna waxay kuu diyaarin.
qaybi, birtiina, oo quruxsan oo la taaban karo, iyo marxaladda, galnoba shaqaalaynta, qaadin, oo timir ah ama xoog trowel, siin ama awood screed.
goysyada ballaarinta caaryada iyo talooyin, isticmaalka alaabta muusikada ah falinjeeerka, jointers, iyo straightedge.
La soco sida diirranaan neecaw ah, ama qabow qabow saamayn yaraynayo ee sibidhka oo dhan hab dhameystiran.
Saxiix truckdriver in ay ku riday bac dhaqaaqo gaariga in ay la taaban karo si toos ah on noocyo, iyo si ay u caawiyaan adeegaya dhabta ah.
Samee dusha cement sugi lahaayeen, burush codsanaya.
Power in uu yahay vibe function si la taaban karo in uu yar yahay.
Degdeg tuuro oo shamiito ah oo la socdaan beertiisa oo isticmaala majarafadihii ama alaabooyin gaar ah si ay u qaybi,.
Iska yaree meelaha si buuxda u soo baxay baabbi'iyey, godad qoditaanka for xoojinta dhengedihii, iyo meesha xoojinta dhengedihii in la saxo la taaban karo, iyadoo la isticmaalayo qalab awood iyo feer.
dabaqa cement qoyan, iyo codsan in ay soo baxaan in ay ahayd gemstone isagoo nadiif ah oo aad u hesho qeexan dhameystiran.
dabaqa qoyan in uu abaabulo, waayo, ku qabanaya, biririf dhamaystiran iyo goobo la grout ama slurry, oo nadiif ah, isticmaalaya trowel.
Aagga dillaac, isticmaalka insert shanlo, waayo-aragnimo iyo ogaanshiyaha dabaqa si aad u ogaato marka ay tahay xoqdo ama finan.
Biyuhu ama soo celin bannaanka, iyo hirgelinta adkaansho iyo amniga xeryahooda si aad u daaweyso dusha of dhabta ah.
saadaasha adag si ay u dhamaystiraan la taaban karo, nadiifin, iyo shaqeeyaan goobaha waaweyn, kooxda, iyo processor, shaqaalaynta qalabka gacanta, daqiijin jireen xoog, ama chisels hawada.
Urursada wax xagta in ay yihiin alwaax, iyo wasakhahaasi ammaan hareeraha meel si ay u noqdaan cusboonaysiiyey, iyadoo la isticmaalayo qalab gacanta.
abuurta qaybaha, talooyin, iyo taageero la taaban karo.
Biyaha u adkaysta ama jifada meelaha la taaban karo, shaqaalaynta walxaha haboon.
Mount tuntay dahaarka dibadda si ay ugu deeqdo u dhameystiray quruxsan ama boolal barroosinka, dhar bir ah oo ay la socdaan kulamada kale ee la taaban karo isku dhafan cusub ama hab.
Dhismo in ay soo saaraan grout, ama slurry, isticmaalaya trowel, upkiisa, nadiifin, ama qalab la taaban karo-isku.
Soor warqad saqafyada on goobta of saleysan, oo dhab ah la qaybiyo Warbixinta saqafka gal la trowel si ay u sameeyaan saldhig terrazzo.
chips jawharad saydhaa ama dhagax dixeed hued, steel budada, ama midabayn budada ka badan bannaanka si ay u abuuraan dhamaystiran oo la qoray.
Sidaas daraaddeed in qaabka kooxoodba ay hogaaminayaan kala duwan ka doorteen ama qaab-dhismeedka loo yareeyo cajalad kooxda macdan, oo iyaga warbaahinta galay bilaabo terrazzo.
Ka faa'ideyso luqluqdo acid muriatic biyo, iyo si aad u nadiifiso oogada.
Qasbi curler badan dusha ku darto chips in dusha.
gloss dusha, muuqashada qalab ama codsanaya fiicneeyay.
Career raad Qualification
Akhrinta weedho qaab fahamka-Fahamka iyo cutubyada in DoCS shaqada ku jira ee la xiriira.
Dhagaysi-To waxa kale-qof ayaa ku yidhi bixiya dhamaystiran dareenka Active,, waqti hesho si aad u ogaadaan waxyaabaha la macmalay, weeydiin arimaha sida fiican, oo aan mesmerizing at jeer in ay khaldan yihiin.
Daabacaadda-Xariirinta wax ku ool ah oo qoraal ah ma aha sida aan habboonayn ee rabitaanka suuqa.
Xariirinta la-hadalka-dadka kale macluumaadka effortlessly wadaagaan.
Xisaabta-Isticmaalka xisaabta si loo xaliyo arrimaha.
Technology-mabaadii'da iyo farsamooyinka si aad u daaweyso arrimaha caafimaadka.
Fikirka in uu yahay muhiim-Dalbashada sabab iyo fikirka ah in la aqoonsado faa'iidooyinka iyo khasaaraha of xal kale, fikrado ama habab si diiddani.
Active-Learning-Fahamka faa'iidooyinka faahfaahinta cusub oo ku saabsan labada problemsolving iyo go'aan-qaadasho la joogo oo socda.
Xeeladaha-Isticmaalka iyo xulashada farsamooyinka trainingANDinstructional iyo nidaamka ku haboon xaalada gaar ah marka fahamka ama aad bartid waxyaabaha ku jira cusub Barashada.
Hubinta-CheckingPERDetermining waxtarka dadka oo dheeraad ah, qofka, ama shirkadaha qaado talaabo sixid ah ama in ay soo saaraan hagaajinta.
jawaabaha Social Perceptiveness oge othersA iyo aqoon halka ay sameeyaan sababta ay u soo jawaabin.
falalka Dexterity-qabsashada eego kuwa kale’ hawlaha.
dadka kale Suuq-dhab in la beddelo caadooyinka ama fikirradooda.
Xalinta Khilaafaadka-qaadashada dadka kale si wadajir ah oo isku dayaya in ay heshiiyaan.
Tababarka-Waxbaridda dadka kale sida in ay tallaabo qaadaan oo kaliya.
Orientation-firfircoon Service isku dayaya in ay ka heli habab si ay u taageeraan shakhsiyaadka.
Dhibaatada Complex Xalinta-Go'aaminta dhibaatooyin adag oo critiquing info la xiriira qiimayn iyo in la dhiso ilaa doorasho iyo codsan fursadaha.
Nidaamka Research-baadhaya shuruudaha item iyo doonayo in ay soo saaraan qaabka a.
Design-Technology Technology si ay ugu adeegaan macaamiisha dhalin ama aaladaha isagoo doonaya inuu.
Qalabka Selection-Go'aaminta nooca qalabka iyo qalab u baahnaa ah si ay u fuliyaan shaqada ah.
Barnaamijyada wajigeeda-darista, mashiinada, fiilooyin, ama qalabka looga baahan yahay si ay u gutaan.
baakadaha computer barnaamij-curinta, waayo, hawlaha badan.
Operation Tracking-Galitaanka calaamadaha kala duwan, burooyinkoodii, ama imtixaanka si loo hubiyo in qalab sax ah oo shaqeeya.
Operation iyo taabta-Maareynta hawlaha qalabka ama qalabka.
Dayactirka-Bandhigyada dayactirka joogtada ah ee alaabta iyo go'aan ka goorta iyo nooca ilaalinta waxaa loo baahan yahay.
Dhib-Go'aansiga sababaha qaladaad orodka iyo xulashada waxa la sameeyo oo ku saabsan mid ka.
Qamaar-qamaar qalabka ama farsamooyinka loo adeegsado hababka in ay yihiin lagama maarmaan ah.
qiimaynta iyo jeegaga alaabta Quality Control Falanqaynta-fulinta, bixiyeyaasha, ama farsamooyin oo lagu qiyaasi shaqeynta ama tayo leh.
View iyo go'aan qaadashada-ka fikirto kharashka guud iyo faa'iidooyinka tallaabooyinka ku jira suurtagal ah in la helo mid ka mid ah ugu habboon.
hagaajinta Falanqaynta-Go'aaminta sida nidaamka waa in qabtaan iyo sida ay hawlaha, xaaladaha, iyo sidoo kale xaafada saameyn doonaa saamaynta.
nidaamyada ama tilmaamayaasha waxqabadka Systems Falanqaynta-Garashada iyo sidoo kale iyadoo la raacayo diirada nidaamka sax ah ama tallaabooyinka u baahnaa ah si kor loogu qaado ka shaqeynayaan.
Time Management-Maareynta ka mid ah ayaa munaasabadda shakhsiyeed iyo sidoo kale kuwa kale’ waqtiga.
Management of Savings-Go'aaminta sida lacag caddaan ah ayaa shaki la'aan la qaatay doonaa in hawsha dhammeeyo, iyo xisaabiyenimo kharashyadan.
Hawlgalka of Waxyaabaha Resources-loo sheegay oo ay arkeen isticmaalka saxda ah ee lagu raaxaysto, qalab, iyo waxyaabaha loo baahan yahay si dhab ah in la sameeyo si gaar ah u shaqeeyaan.
Kormeerka Shaqaalaha Resources-Horumarinta madadaalo, iyo shakhsiyaadka keentay halka ay iyagu qabtaan, kala ah dadka ugu waxtarka badan ee shaqo in.
Waxbarashada Qualification Qualification aqoonta
In ka yar-badan Degree School Top
Degree Senior School (ama GED ama Senior School isu Qualification)
In ka badan 2 sano, sida ugu badan oo ay ka mid yihiin 4 sano
Management Skills Work Need
Tenacity – 89.32%
dadaal – 93.53%
Iskaashiga – 94.10%
Welwelina Qaar kale – 88.12%
Hanuuninta dhaqanka – 90.44%
gaynta cadaadis – 87.53%
halaynta – 91.36%
Fiiro gaar ah u Details – 93.35%
Horumarin – 83.08%
Adoo ka fakaraya Analytical – 82.34%
Previous Science Social Research Job Description Sample
Kor adeegyada dhaqaale-, sida tusaale ahaan mortgage, levy, and investments guidance to consumers of banking …